XASUUS: Hadalkii Zinedine Zidane Ka Sheegay Shirkii Jaraa’id Ee Uu Isku Casilay Iyo Qaabka Uu Usii Saadaaliyey Mugdi Hadhayn Doona Los Blancos – Latest Sports News
XASUUS: Hadalkii Zinedine Zidane Ka Sheegay Shirkii Jaraa’id Ee Uu Isku Casilay Iyo Qaabka Uu Usii Saadaaliyey Mugdi Hadhayn Doona Los Blancos
Dhamaadka bishii May ee sannadkii hore, maalmo kaddib markii ay Real Madrid ku guuleysatay koobkeedii saddexaad ee xidhiidh ah ee Champions League oo noqonayey markii 13aad ee ay qaadaan, ayaa waxa mar kaliya lagu war helay shir jaraa’id oo uu Zinedine Zidane kusoo hor-fadhiistay saxaafadda.
Cidina ma filaynin inuu ka nixin doono ciyaartoyga iyo Jamaahiirta, laakiin hadal uu halkaas ka jeediyey ayaa qof walba uu anfariir ka qaaday.
Xattaa ciyaaryahannada naadiga oo aanu hore ugu sii sheegin marka laga reebo kabtanka Sergio Ramos ayaa amakaag ka qaaday, waxaana ay hadal hayntiisu ahayd midda ugu weyn dunida ciyaaraha illaa laga gaadhayey koobkii adduunka.
Laba maalmood kahor intii aanu bilaabmin Koobka Adduunku, ayaa Real Madrid ay ku dhawaaqday inay beddelka Zinedine Zidane u magacaabeen Julen Lopetegiu oo ahaa tababaraha xulka qaranka Spain, waxaanay taasi keentay in maalintii xigtay uu xidhiidhka kubadda cagta dalka Spain shaqada ka caydhiyo tababare Lopetegui, taas oo sababtay qalalaase uu xulku galo.
Xidhiidhka Spain ayaa shaqada ay ka eryeen Lopetegui waxay u magacaabeen halyeygii Real Madrid ee Fernando Heirro. Spain awood umay yeelanin inay bandhig fiican ka samayso Koobka Adduunka iyadoo uu burburiyey go’aankii uu Lopetegui ku ogolaaday inuu noqdo tababaraha Real Madrid iyadoo ay xulka uu wato ku jiraan ciyaaryahanno ka tirsan Barcelona oo aad u neceb kooxda uu kusii socdo.
Lopetegui kuma najixin shaqadiisii Real Madrid, waxaana sabab u noqonay in laga caydhiyo Barcelona oo 5-1 ku garaacday bishii October ee sannadkii hore, waxaana shaqada ka beddelay Santiago Solari oo isaguna hadda cidhiidhi ku jira.
Markii laba jeer oo isku xiga ay afar maalmood gudahood Barcelona ku garaacday garoonka Santiago Bernabeu, Real Madrid waxay martigelisay Ajax oo ay hore ugaga soo badisay 2-1, waxaase ciyaartani ku noqotay mashaqo kale kaddib markii lagu garaacay 4-1, sidaana ay kaga hadhay tartanka Champions League, iyadoo guul-darradana lagu tilmaamay tii ugu qadhaadhayd muddo 15 sannadood ah kasoo gaadha tartanka Champions League.
Haddaba miyuu Zinedine Zidane sii saadaaliyey amaba sii arkayey in arrintan oo kale kusoo socoto kooxda? Su’aashan waxa ka jawaabaya hadalkii uu ka yidhi shirkii jaraa’id ee uu shaqo ka tegistiisa ku shaacinayey.
Zidane oo war fadiyeyeennada kula hadlayey magaalada Madrid, ayaa waxa uu yidhi: “Way igu adkaan lahayd inaan mar kale sannadka dambe kula guuleysto Real Madrid. Waxa jiray waqtiyo wanaagsan, laakiin sidoo kale marar xaaladdu adag tahay ayaa jiray.
“Ma illoobayo taas. Kooxdan, waxa qasab kugu ah inaad tan ogaato: Ma doonayo inaan bilaabo xili ciyaareedka oo aan waqti xun galo. Waxaan doonayaa inaan soo afjaro waayahayga Real Madrid iyadoo wax walba fiican yihiin. Waxaan sidaas sameeyey anigoo ciyaartoy ah, haddana mar kale ayaan samaynayaa anigoo tababare ah. Waa waqtigii ku habboonaa inaan ka tago iyadoo wax walba fiican yihiin.”
Zinedine Zidane ayaa markaas kaddib saadaaliyey in kooxdu guul-darrooyin iyo marxalado adag kusoo fool leeyihiin, waxaanu yidhi: “Saddex sannadood kaddib, way adag tahay inaad sii ahaato tababare, iyadoo aad ogtahay inaad saddex Champions League kusoo guuleysatay.
“Si fiican iiguma muuqato inaanu mar kale guuleysan doono. Haddii uu igu jiro dareenka ah inaanan guuleysan doonin, waxa waajib ah in isbeddel yimaaddo.
“Markii aan ciyaartoyga ahaa, marka aanan faraxanayn maan guuleysan jirin, kaddib waa inaad naftaada la hadasho oo aanad dadka kale eedaynin, waa inaad go’aan gaadho, waana sidaas.
“Haddii aanan si cad u arkaynin inaanu guusha sii wadayno, waxay ka dhigan tahay in lag aadhay dhaqtigii aad odhan lahayd, ‘waxa dhaanta inaad booska bannayso.'”
Marka la dhuuxo hadallada Zidane, waxa soo baxaysa in halyeyga reer France uu sii garanayey in dhibaato kusoo fool leedahay Real Madrid.